Ny tsy fampiasana traikefa manokana dia manimba anao | Martech Zone
Manimba anao ny tsy famoahana traikefa manokana
Alakamisy, Jona 18, 2015 Alahady, Jona 21, 2015 Douglas Karr
Tamin'ny IRCE tamin'ity taona ity tany Chicago, dia nanao tafa sy dinika aho David Brussin, mpanorina ny Monetate, ary resaka nifanazava tamin'ny fiovan'ny fanantenan'ny mpanjifa sy ny traikefa antenain'izy ireo amin'ny mpivarotra an-tserasera na amin'ny Internet. Ny tranga momba ny maha-izy azy dia mihamatanjaka ary mety nahatratra teboka farany.
Monetate's vao haingana Tatitra Ecommerce Quarterly dia mampiseho fa miakatra ny tahan'ny fihenam-bidy, mihena ny salan'isan'ny filaharana ary mihena hatrany ny tahan'ny fiovam-po. Ny personalization sy ny fanandramana dia manakana ity fironana ity… tsy noho ny tolo-kevitra namboarina fotsiny fa noho ireo tranonkala izay mampiasa ireo haitao ireo dia mahazo sy mitazona ny mpanjifa noho ny fanatsarana ny traikefan'ny mpanjifa.
Ny tatitry ny Ecommerce Quarterly dia mamakafaka santionany tsy an-kanavaka mihoatra ny 7 miliara traikefa amin'ny fiantsenana amin'ny Internet ampiasaina fivarotana mitovy angon-drakitra isaky ny telovolana. Ny habetsaky ny tatitra dia voatanisa ao amin'ny santionany rehetra. Ireo tondro fampisehoana lehibe, toy ny salan'isa momba ny lamina sy ny tahan'ny fiovam-po dia miovaova arakaraka ny indostria sy ny tsena. Ireo salan'isa ireo dia navoaka hanohanana ny famakafakana isaky ny famoahana ny tatitra ihany, ary tsy natao ho fari-piainan'ny orinasan-tserasera.
Monetate fahefana personalization maro fantsona. Ny interface an'ny Monetate Platform dia ahafahan'ny mpivarotra mamorona, manandrana ary manaparitaka traikefa nomerika manokana tsy manam-petra miaraka amin'ny filàna voafetra amin'ny IT na loharanom-pahalalana amin'ny sehatra tena izy.
Monetate ho an'ny mailaka - Ataovy personalize ny mailakao ary ampifandraiso amin'ny pejin'ny fipetrahana.
Monetate ho an'ny varotra - Tolo-kevitra momba ny vokatra manokana sy badge.
Monetate ho an'ny fampiharana finday - Personalization sy fitsapana ho an'ny fampiharana finday teratany.
Topimaso ny topimaso momba ny personalization sy ny tolo-kevitra
miaraka Monetate ho an'ny personalization, azonao atao ny mamorona traikefa ho an'ny mpanjifa mifanaraka amin'ny tranonkala, mailaka ary fampiharana finday. Azonao atao ny manavaka ny traikefa fiantsenana iray manontolo amin'ny alàlan'ny fanamboarana ny fananana, ny sora-baventy, ny badge, ny maherifo ary maro hafa. Ny singa data dia azo ampidirina avy amin'ny CRM sy POS ary koa ny data, toerana, fitondran-tena ary angona fitaovana hanatsarana ny traikefan'ny mpanjifa manerana ny tranokalanao.
Ny ROI an'ny Personalization
Miaraka amin'ny fanamby eo amin'ny tsena sy fifaninanana mitombo tsy mitsaha-mitombo, ny fanatontosana olona dia tsy fanomezana famerenam-bola fotsiny fa lasa ilaina izany.
Kipling vao tsy ela akory izay dia nanakodia ny takelaka fanolorana vokatra ao amin'ny pejy fandraisam-bahiny miaraka amin'i Monetate. Na dia fototra fotsiny aza izany, dia nihataka lavitra tamin'ny fanandramana ny fametrahana azy ny orinasa. Ny kinova iray dia nampiseho ny tolo-kevitry ny vokatra eo an-tampon'ny pejy raha ny kinova iray kosa dia mampiseho takelaka iray eo ambanin'ny pejy. Vokatr'izany, nampitombo ny ekipa mpivarotra ny ekipa ary namaritra ny toerana tsara indrindra hanatsarana ny tahan'ny fiovam-po.
Miaraka amin'ny tahan'ny fiovam-po 7.29 isan-jato sy 9.33 isan-jato, samy nihoatra ny 1.64 isan-jato ny tahan'ny fiovam-po ifotony.
Tags: david brussinvotoaty mavitrikafanatsarana ny mailakapersonalization mailakafianarana milinamonetateOptimizationpersonalizationtolo-kevitra momba ny vokatrafanatsarana ny tranokalafanandramana tranonkalalasibatra